Ku laabo Sizzle: Sida Suuqgeeyayaasha E-Ganacsiga u Isticmaali Karaan Hal-abuur si ay u Kordhiyaan Soo-noqoshada | Martech Zone
Khamiis, Maarso 3, 2022 Khamiis, Maarso 3, 2022 Paul Childs
Cusboonaysiinta gaarka ah ee Apple ayaa asal ahaan beddeshay sida suuqgeeyayaasha e-commerce u gutaan shaqadooda. Bilihii laga soo bilaabo casriyeynta la sii daayay, kaliya in yar oo ka mid ah isticmaalayaasha iOS ayaa doortay raadinta xayaysiiska.
Marka loo eego cusboonaysiinta ugu dambeysay ee Juun, qaar ka mid ah 26% isticmaaleyaasha caalamiga ah ayaa oggolaaday abka inay kula socdaan aaladaha Apple. Tiradani aad ayay uga hoosaysay Maraykanka oo kaliya 16%.
Iyadoo aan la helin ogolaansho cad si loola socdo dhaqdhaqaaqa isticmaalaha ee goobaha dhijitaalka ah, qaar badan oo ka mid ah xeeladaha ololaha ee suuqgeynayaashu ay ku tiirsan yihiin hadda suurtagal maaha. Suuqgeeyayaasha e-ganacsiga waxay yeelan doonaan waqti gaar ah oo adag maadaama hal-abuurka firfircoon ee ay ka faa'iidaysteen si ay u xasuusiyaan isticmaaleyaasha alaabtii ay eegeen ama kaga tageen gaadhigooda si aad ah ayaa loo cidhiidhiyay.
Xayeysiisyada raadraaca ee la isku dayey iyo kuwa run ah kuma dhacayaan dariiqa gebi ahaanba, laakiin si weyn ayay u beddeli doonaan. Qiimaha taraafikada awood u siinaya in la xaddido dabagalka xayeysiiska (LAT) ayaa ku koraysa aduunka 14.5 ka dambeeya, iyo natiijooyinka la wanaajiyay ee ay keenayaan marka loo eego taraafikada LAT ayaa dhiirigelinaysa suuqlayda inay dalbadaan wax aad uga sarreeya sidii ay ahaan jireen waagii hore. Si looga faa'iidaysto kuwan iyo isbeddellada kale, suuq-geynta e-commerce waxay u baahan doonaan inay si aasaasi ah u beddelaan qaabkooda xayeysiiska hal-abuurka. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha aasaasiga ah ee hal-abuurku u ahaan doono aalad muhiim u ah guusha e-ganacsiga, iyo talooyinka suuq-geeyayaasha ee raadinaya inay sare u qaadaan soo laabashadooda kharashaadka xayeysiiska marka isbeddeladani dhaqan galaan.
La'aanta xogta isticmaaluhu waxay u baahan tahay hal-abuur leh rafcaan ballaadhan
Hal-abuurka quruxda badan iyo asalka ah ayaa ka caawin doona summadaha inay kala soocaan goob suuq ah oo dadku ku badan yihiin, xitaa iyada oo aan la isticmaalin aaladaha la beegsanayo. Iyadoo la isku deyayo in la gaaro gaaritaanka weyn, ganacsiyadu inta badan waxay adeegsadaan xayeysiisyo qaawan iyo kuwo guud. Laakin tuurista shabag ballaadhan maaha inay macnaheedu tahay nashqad jilicsan. Haddii aadan ku hallayn karin inaad gaartid qof gaar ah, hal-abuurkaagu waa inuu noqdaa mid aan u adkaysan karin dad badan hal mar. Xayeysiyayasha maalgeliya hal-abuurka gaarka ah waxay yeelan doonaan waqti sahlan inay soo jiitaan dareenka oo ay helaan macaamiil cusub qaybta ugu ballaaran ee qalooca gambaleelka.
Hal-abuurka xayeysisku wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa fursad aad ku gaadhsiin karto shakhsiyadda astaantaada aduunka. Inta badan noocyada, taasi waxay ka dhigan tahay in la isku dhejiyo muuqaalo indho-qabad leh oo leh fariin xoog leh. Maqnaanshaha xogta heerka-isticmaalka ayaa ka dhigaysa mid aad muhiim u ah xayaysiiyayaasha si ay u gudbiyaan hal-abuur saamayn leh, iyaga oo isticmaalaya cod summadeed oo cad si ay u gudbiyaan khibradaha macaamiisha ee xusuusta leh. Xayeysiyeyaashu waa inay diiradda saaraan fariimaha isku xidha qiyamka summadaha iyo nolosha macaamiisha. Ka soo qaad in qof kasta oo arka hal-abuurka xayaysiiskaagu uu la kulmaayo astaantaada markii ugu horreysay; Maxaa la gudboon macaamilkaas inuu ka ogaado shirkaddaada? Isku dheelli tirka fariimaha cad, xoogga leh iyo farsamooyinka sheeko kicinta si aad u samayso aragti waarta. Sida maahmaahdii hore ee iibku u dhacday: ha iibin hilibka hilibka doofaarka, iibi shafka.
Kordhi dadaalka dabiiciga ah si aad ula xiriirto macaamiisha halka ay joogaan
Macaamiisha maanta waxay filayaan inay awood u yeeshaan inay si firfircoon ula xidhiidhaan oo ay kala hadlaan summada waxa iyaga muhiim u ah. Hal-abuur wax ku ool ah ayaa u oggolaanaya summadaha si ay u bixiyaan waayo-aragnimada wada-hadalka ee noocaas ah iyada oo loo marayo xeeladaha dabiiciga ah sida warbaahinta bulshada. Tusaale ahaan, goobo badan oo warbaahinta bulshada ah ayaa siinaya isticmaalayaasha ikhtiyaarka ah inay iskaa wax u qabso xogta tirakoobka qaarkood si ay uga caawiso horumarinta khibradooda. Ku xidhida macmiisha halka ay mar horeba ku urursanayeen waa wax aan caqli-gal ahayn, iyo mashiinnada lagu dubay kartida bartilmaameedka aasaasiga ah waxay gacan ka geystaan ​​dib u soo celinta qaar ka mid ah xogta gaarka ah ee luntay iyada oo aan la raadin xayeysiis. Macaamiisha ayaa sidoo kale awood dheeraad ah u leh inay ku codeeyaan boorsooyinkooda, sidaas darteed xayeysiiyayaashu waa inay abuuraan hal-abuurkooda - iyo wadahadalka ay dhiirigelinayaan - iyagoo leh aragti iyo dareenka qiimaha shirkadda.
Ku beddel talooyinka khuseeya alaabta caanka ah
Tallaabooyinka khaaska ah ee cusub ee Apple waxay soo afjari doonaan habaynta talooyinka alaabada gaarka ah ee ku salaysan hab-dhaqankii hore ee macaamiisha ee qof kasta oo curya raadraaca. Meesha alaabta la midka ah, xayaysiiyayaasha waa inay diirada saaraan waxa caanka ah. Xayeysiiska hal-abuurka leh ee iftiiminaya badeecadaha la iibiyo waxa ay ka dhigtaa maalgashi caqli-gal ah maxaa yeelay waxa ay soo bandhigaysaa labadaba macaamiisha mustaqbalka iyo kuwa jiraba alaabta aad hore u taqaanay u dhaqaajiya cirbadda ganacsigaaga.
Maskaxda xoolaha waxay siisaa macaamiisha kalsoonida noocyada cusub waxayna ka dhigtaa inay u badan tahay inay iibsadaan alaabada ay caanka ku yihiin asaagooda. Taasi waa sababta ku muujinta iibiyeyaasha ugu wanaagsan hal-abuurka xayaysiiskaagu waa hab wanaagsan oo lagu kordhiyo kalsoonida laguna hago macaamiisha cusub marinka iibka, xitaa iyada oo aan lahayn dhibco xog qotodheer oo ku saabsan cidda ay yihiin iyo waxa ay daneeyaan.
Muuji kala-duwayaasha muhiimka ah iyo sifooyinka alaabta gaarka ah
Calaamaduhu waxay sidoo kale ula dhaqmi karaan maqnaanshaha macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan macaamiisha mustaqbalka fursad ay ku muujiyaan kala duwanaanshaha muhiimka ah ee ka dhigaya alaabtooda mid gaar ah. Falanqaynta xogta iibka ayaa ka caawin doonta summadaha inay go'aamiyaan waxa alaabtooda ka dhigaya kuwa la xasuusto. Markaa waxa aad samayn kartaa hal-abuur kor u qaada walxahaas, sida alaabooyinka ku shaqeeya run-ilaa-xajmiga, silsilad sahayda waarta, ama isticmaalka alaabta dib loo warshadeeyey.
Dhageysiga macaamiishaada waxa ku saabsan iyaga sidoo kale waa xeelad waxtar leh; dib u eegista macaamiishayda iyo ka qaybgalka warbaahinta bulshada si loo helo aragtiyo gaar ah oo ku saabsan waxa ay macaamiishu ka jecel yihiin astaantaada oo ay horumariyaan hal-abuur u dabaaldegaya sifooyinkaas. Ha ka baqin inaad ku tiirsato qodobbada kala duwanaanshaha ee ku dhiirigeliyay macaamiishii hore inay noqdaan calaamad daacad ah, iyada oo aan loo eegayn sida lama filaanka ah ee ay u yihiin.
Hal-abuurku gabi ahaanba wuu yaraanayaa oo si gaar ah ayuu u ahaan doonaa marka la joogo 14.5 adduun. Laakiin gaar ahaan marka raadraaca xayaysiisku uu kordho heerarka kala-doorashada iyo korsashada ee iOS 14.6 iyo wixii ka dambeeya, hal-abuurku wuxuu u noqon doonaa aalad muhiim u ah xayaysiiyayaasha raadinaya inay la xiriiraan macaamiisha cusub iyo horumarka dhegaystayaal aan la garanayn. Sida dhammaan hal-abuurnimada tignoolajiyada, horumarku waa dariiqa hore loo maro. Xayeysiyeyaashu si ay u guuleystaan, waxay u baahan doonaan inay la qabsadaan oo ay horumariyaan fahamkooda hal-abuurka iyo codsigeeda badan ee xoogga badan.
Tags: asturnaanta tufaaxahal abuur lehecommerceSuuqgeeyayaasha ecommercesuuq geynta ecommercemacruufkaGaadiidka LATku soo noqo xayeysiintaku soo noqoshada hal-abuurka